अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको वार्ता रद्द गर्ने उत्तर कोरियाको धम्की, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको वार्ता रद्द गर्ने उत्तर कोरियाको धम्की
बीबीसी। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग हुने भनिएको बहुप्रतिक्षित वार्ता रद्द गर्ने धम्की दिएको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुने बैठकका विषयमा फेरि विचार गर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच आगामी १२ मा सिंगापुरमा वार्ता हुने तय भएको थियो। यो वार्तामा उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार कार्यक्रम समाप्त गर्ने विषयमा छलफल हुने तय भएको थियो। तर बुधबार उत्तर कोरियाले सबैलाई अचम्ममा पार्दै दक्षिण कोरियासँग हुने भनिएको वार्ता रद्द भएको घोषणा गरेको थियो। उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच जारी संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
उत्तर कोरियाको सरकारी संचारमाध्यमले बुधबार उपविदेशमन्त्री किम के –ग्वानलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘यदि अमेरिका हामीलाई किनारा लगाएर केवल एकतर्फी माग राखेर हाम्रो परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्ने उद्देश्य राख्छ भने हामी त्यस प्रकारको वार्ताको पक्षमा छैनौं। हामी अमेरिका र डीपीआरकेबीच हुने आगामी बैठकका विषयमा पनि विचार गर्छौं।’ ‘डीपीआरके’ को अर्थ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया हो। यो उत्तर कोरियाको आधिकारिक नाम हो।
अहिले दक्षिण कोरियामा अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन्। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाबीच अहिले जारी सैन्य अभ्यास शीतकालीन ओलिम्पकमा हुने भनिएको थियो। तर त्यो बेला उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच अप्रत्याशित रुपमा भएको भेटवार्तापछि सो सैन्य अभ्यासको मिति पछि सारिएको थियो।
अचानक दक्षिण कोरियासँग पछि हटे किम जोन, अन्तिम चरणमा वार्ता रद्द